गगनको भूमिकाबाट कांग्रेसका नेताहरु नै सशंकित | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २० मंसिर २०७५, बिहीबार १४:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेताको रुपमा चर्चा कमाएका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाको भूमिका र गतिविधिबाट पार्टीका शीर्षदेखि बरिष्ठ नेताहरु समेत शसंकीत बनेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा विभिन्न मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको कोटा उपलब्ध गराउँदा र उपकुलपति नियुक्ति गर्दा नजरना लिएर आर्थिक रुपमा मजबुद भएका गगन थापा यतिवेला आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै महामन्त्रीको सपना देख्न थालेका छन् ।
पद र शक्तिका लागि जुनसुकै समूह, गुट र व्यक्तिसँग सम्झौता गर्न माहिर मानिएका गगनको भूमिकाबाट यतिवेला सभापति शेरबहादुर देउवादेखि रामचन्द्र पौडेल हुँदै कृष्णप्रसाद सिटौला पनि आजित भएका छन् । मन्त्री हुँदा सभापति देउवाका पृष्ठपोषक जस्तै भएका थापाले गत बर्ष पार्टीले निर्वाचनमा सर्मनाक हार बेहोरेपछि सभापति देउवाको राजिनामा मागेका थिए । निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको हारलाई स्वीकार गर्दै नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने भन्दै गगनले एक दर्जन यूवा नेतालाई भेला गरेर देउवाविरुद्ध अभियान नै चलाएका थिए ।
देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेपछि थापासँग देउवाको सम्बन्ध विग्रिएको थियो । थापाले देउवाको व्यक्तिगत रुपमा आलोचना गर्न थालेपछि देउवाले ज्वाईँलाई सम्झाउन केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीलाई समेत सम्झाएका थिए । तर, केसीले ज्वाईँलाई सम्झाउनुको सट्टामा देउवाबिरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई बलियो बनाएका थिए ।
दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि शुसील कोइराला नेतृत्वको सरकारको समयसम्म आउँदा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा उभिएका थापाले त्यहाँ आफूले महामन्त्रीको उम्मेदवार पाउने सम्भावना नदेखेपछि तत्कालिन पार्टी महामन्त्रीसमेत रहेका कृष्णप्रसाद सिटौलासँग गुट खडा गरेका थिए । सिटौला गुटबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएर ससुरा अर्जुननरसिंह केसी र बीपी पुत्र डा. शशांक केइरालालाई पराजित गर्न मनसुवा राखेका थापा त्यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेर थन्किएका थिए ।
अहिले आएर थापा सिटौला गुटबाट अलग हुन थालेका छन् । दोहो¥याएर मन्त्री बन्ने गगनको उद्देश्यलाई सिटौलाले ब्रेक लगाएपछि गत बर्ष असारदेखि नै थापा सिटौलाबाट टाढिएका थिए । पछिल्लो समय गगनले युवा नेताको मोर्चाबन्दीको नाममा गरेको गतिविधिबाट समेत सिटौला चिढिएका छन् । गगन सिटौलाबाट आफ्नो मनसुवा पुरा हुने नदेखेपछि अहिले फेरि कोइराला परिवारका सदस्यको शरणमा पुगेका छन् । गगनले दुई साताअघि मात्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइराला र नोना कोइराला पुत्र डा. शेखर कोइरालासँग एक घण्टासम्म गोप्य छलफल र सल्लाह गरेका थिए ।
गगनले विगत ६ महिनादेखि लौहपुरुष गणेशमान सिंहका छोरा पुर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग पनि सहकार्य गर्न थालेका छन् । उनले आफ्नै गुरु भिमसेनदास प्रधानलाई असहयोग गर्ने सिंहसँग लगनगाँठो जोडेका हुन् । गगन यतिखेर चौतर्फी सम्बन्ध बनाउँदै तपाईँहरुलाई सहयोग गर्ने हो तर मलाई महामन्त्री चाहियो भन्दै हिँडेका छन् । गगनको यो चरित्र देखेर अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि आजित भएका छन् । उनले आफूलाई प्रत्यक्षतर्फ महामन्त्रीमा उम्मेदवार बनाएमा देउवा गुटमा समेत आउने बताएका थिए ।
संस्थापन र संस्थापनइत्तर पक्षका हरेक नेतासँगको सहकार्य गर्दै आएका गगनको व्यवहारबाट अर्का नेता गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, चन्द्र भण्डारी समेत आजित भएका छन् । गगनको एक्लै अघि बढ्ने स्वभावबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल पनि शशंकीत बनेका छन् । अर्का नेता अमरेस कुमार सिंहलाई त घुम्टो ओडेर घ्यु खाने चरित्रको भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
गगनले हालै सरकारको असक्षमताको बिषयमा प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालको नाम मुछेका छन् । उनले यस्तो हर्कत गर्नुको पछि दुई बर्षअघि प्रहरीसँगको इन्काउण्टरमा मारिएका घैंटे उर्फ कुमार श्रेष्ठको प्रतिशोध मात्र भएको कांग्रेसका युवा नेताहरुले नै बताउन थालेका छन् । घैंटेलाई इन्काउण्टर गरी मारेको घटनालाई लिएर गगनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत उजुरी बोकेर गएका थिए । जुन प्रकरणले सामाजिक सञ्जालमा उनको बद्नाम भएको थियो । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक)
धनकुटा । धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रादेशिक राजधानी बनाउने संर्घष समितिबीच शुक्रबार भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएपछि स्थानीय…
दिल्लीसँग ‘दिल’ मिलेपछि ओली अब चीनतिर ‘लसक्क’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै चीन जाने करिब निश्चित भएको छ ।
नयाँ दिल्लीबाट सिधै चीन…
नेपालबाट राजसिंहासन खोसिएका ज्ञानेन्द्रलाई भारतले किन महत्व दिंदै छ ? हिन्दुत्वको मुद्दाबारे भारतीय नेताहरुसँग कुरा हुन सक्ने !
काठमाडौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत प्रस्थान् गरेका छन् । भारत उड्नअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै उनले रुखका पात…
उद्योगी मार्ने गुण्डा नाइके मनोज पुन विश्वकै डरलाग्दो अपराधि भारतीय अन्डरवर्ल्डसँग ‘कनेक्सन’
काठमाडौं । रुपन्देहीका गुण्डा नाइके मनोजबहादुर बूढामगर उर्फ मनोज पुनको भारतीय…
अलपत्र मौलिक हक ८३ मध्ये एउटा पनि छैन तयार
काठमाडौं । सरकारले संविधानले निर्धारण गरेको मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू संसद्मा नदिँदा ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् ।
बजेट अधिवेशनका रूपमा सुरु…
यसरी बुझे पत्रकारले नालायक महानगरका मेयरको दानापानी, प्रधानमन्त्रीले बहिष्कार गरे
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा बामदेव गौतमको फरक मत
१९४७ को त्रिपक्षीय असमान सन्धी र सम्झौता विरुद्धको अभियानलाई साथ दिन आम नेपालीलाई आग्रह गर्दछौः पदम सुन्दर लिम्बु(भिडियो सहित)
भारतमा ३३ किलो सुन बरामद, नेपालमा सुन थाल्यो अनुसन्धान समितिले !
एयर एसियाले बुझाएको साढे ११ करोड हिनामिना, संम्लगन कर्मचारीहरू केन्द्रमा
फेवातालमा खसेका युवाको शव फेला पर्यो
काे-काे लिन्छन् घरधनी सांसद र मन्त्री क्वार्टर बस्ने मन्त्रीले संसदबाट घरभाडा
महासमिति बैठक ‘कर्मकाण्डी’ मात्रै हुने नेताहरूकाे तर्क
मिनी ट्रक दुर्घटनामा २० को मृत्यु, १५ घाइतेकाे काठमाडाैंमा उपचार हुँदै
प्रधानमन्त्री खरिद प्रमुख हुने लालशा
आलिया–रणवीर प्रेम–चर्चा : महेश भट्टले मुख खोले
अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने यात्रुले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएमा १ करोड ७९ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने
नुवाकाेट दुर्घटना अपडेट: १७ काे शव भेटियो, भीरमा टर्च बालेर शव खोज्दै प्रहरी
काे-काे लिन्छन् घरधनी सांसद र मन्त्री क्वार्टर बस्ने मन्त्रीले संसदबाट घरभाडा 137 views
यसरी बुझे पत्रकारले नालायक महानगरका मेयरको दानापानी, प्रधानमन्त्रीले बहिष्कार गरे 66 views
समिटमा ठुला नेताले विदेशि अतिथिसँग भेटेको र सम्पादकहरुले हायतमा रक्सी पिएको फोटो वाहिर ल्याउः एकनाथ ढकाल 44 views
फेवातालमा खसेका युवाको शव फेला पर्यो 33 views
सैनिक नियमावली संशोधनले जर्नेल–कर्णेललाई हाइसन्चो 33 views
यसरी फस्छन निर्दोष डाइभर साउदी अरवमा 17 views
एयर एसियाले बुझाएको साढे ११ करोड हिनामिना, संम्लगन कर्मचारीहरू केन्द्रमा 14 views
१९४७ को त्रिपक्षीय असमान सन्धी र सम्झौता विरुद्धको अभियानलाई साथ दिन आम नेपालीलाई आग्रह गर्दछौः पदम सुन्दर लिम्बु(भिडियो सहित) 14 views
भारतमा ३३ किलो सुन बरामद, नेपालमा सुन थाल्यो अनुसन्धान समितिले ! 12 views
आलिया–रणवीर प्रेम–चर्चा : महेश भट्टले मुख खोले 10 views